ပြည်သူ့: "ဒီဆိဒေါသကစား!" Tele RELAY တစ်ခု - ကျောက်စိမ်း Hallyday သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူပါတီပြီးနောက်အင်တာနက်အသုံးပြုသူများ၏ IRE ဆွဲဆောင်
မူလစာမျက်နှာ » လူတွေ & ပုံစံမျိုးမှာနေထိုင် "လူတွေက" ဤဆိ "ဒေါသကစားကျောက်စိမ်း Hallyday သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူပါတီပြီးနောက်အင်တာနက်အသုံးပြုသူများ၏ IRE ဆွဲဆောင်
လောလောဆယ် Saint-ဘာသယ်လဲမီအတွက်ကျောက်စိမ်း Hallyday သလောက်နွေရာသီအားလပ်ရက်၏အားသာချက်ကြာပါသည်။ လွန်ခဲ့တဲ့ယင်း၏ 15 နှစ်ပေါင်းရက်အနည်းငယ်ကျင်းပပြီးနောက်, ဂျော်နီ Hallyday ၏မွေးစားသမီး Yannick နောဧ၏သားအပါအဝင်, မိမိသူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူပျော်စရာရှိခြင်းခဲ့သည်။
Публикацияотကျောက်စိမ်း Hallyday (@jadehallyday) 19 2019 Июлв 11: 42 PDT ရန်ကုန်
မကြာသေးမီကကျောက်စိမ်းရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုတော်တော်များများဗီဒီယိုများ Instagram ကို၎င်းတို့၏ပုံပြင်များ shared ။ ရုပ်တုဆင်းတုများတွင်ဆယ်ကျော်သက်ပျော်စရာနိုက်ကလပ်ရှိသည်။ တဦးတည်းလည်းရှည်အနီရောင်ဝတ်စုံဝတ်ထား, ကျောက်စိမ်းကခုန်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
Публикацияотကျောက်စိမ်း Hallyday (@jadehallyday) 19 2019 вИюн 6: 19 PDT ရန်ကုန်
ဆယ်ကျော်သက်များ၏ဗီဒီယိုကို web ပေါ်ဘက်ဇ်စေပြီ။ အင်တာနက်သုံးသူတွေရဲ့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှိ ဝေဖန် "အာရုံကိုဆွဲဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်အပေါ်အငြင်းပွားဖွယ်ရာထွက်" ရာကျောက်စိမ်း၏ဤလိုက်စားအပြုအမူမှကလေးများနှင့်၎င်းတို့၏မိဘများ:
ထိတ်လန့် !!! ဤသူငမိန်းကလေးတွေဟာသူတို့ရဲ့အသက်အရွယ်မှာတာဝန်မဲ့မိခင်များရှိသူတို့သေတ္တာများပုံမှန်အားပိတ်ပင်တားမြစ်သည်အားလုံး "ခိုးယူ" ကားနဲ့တူထလုပ်
ဒါကြောင့်ကတိပေးထားတယ်, ဤလိုက်စား Lolita ...
ဒီဆိတ်သငယ်တို့သည်လိုက်စားကစားနဲ့အာရုံစူးစိုက်မှုကိုဆွဲဆောင်ရန်ရည်ရွယ်ချက်အပေါ်အငြင်းပွားဖွယ်ရာထွက်သိမြင်ဖို့ mom, အဖြစ်ကအကြီးအကျယ်ဒေါသထွက်။ အဘယ်အရာကိုပညာရေးကသူ့မိခင်ကိုပေးတော်မူ၏? သူမသည်ပိုကောင်းမိမိသမီး၏စာပမြေားကိုထိန်းချုပ်ထားသည့်အမိုးအကာ။
Публикацияотကျောက်စိမ်း Hallyday (@jadehallyday) 12 2019 Майв 12: 25 PDT ရန်ကုန်
ဤသည် Laeticia Hallyday ၏သမီးသည်အသုံးပြုသူများအမျက်တော်ကိုဆွဲဆောင်သောပထမဦးဆုံးအကြိမ်မဟုတ်ပါဘူး။ မကြာသေးမီကညဦးအချိန်, ရွှင်လန်းခြင်းနှင့်သူမ၏ညီမလည်းမျက်နှာဖုံးဖြစ်ခြင်းများအတွက်ဝေဖန်ခဲ့ကြ ...
Публикацияот Celebrity Gossip (gossip.celebrites @) 12 2019 Авгв 12: 29 PDT ရန်ကုန်
သင်သည်သူတို့၏အမူအကျင့်များဘယ်လိုထင်သလဲ သငျသညျကိုအင်တာနက်နှင့်အတူသဘောတူပါသလား မှတ်ချက်များအတွက်သင့်ရဲ့ထင်မြင်ချက်မျှဝေပါ။
Russie – Afrique : Evgueni Prigojine, le « cuisinier » de Vladimir Poutine – JeuneAfrique.com
DRC: ပြည်နယ်ရန်ပုံငွေ $ 15 သန်း၏ "ပျောက်ဆုံး" အကြောင်းကိုဘဏ္ဍာရေး Inspector သတိပေးချက် - JeuneAfrique.com
72ရက်သတ္တပတ်ကီလိုဖယ်ရှားပစ်ရန်အရသာအစားအစာကြက်ဥ - ကျန်းမာရေး PLUS MAG: အလေးချိန်ဆုံးရှုံး